अब नेपालमा पनि निजी विमान राख्न पाइने – NepalajaMedia
August 28, 2020 246
काठमाडौँ, १२ भदौ । व्यक्तिगत प्रयोगका लागि समेत विमान दर्ता गरेर उडान गर्न पाउने गरी सरकारले नयाँ प्रस्ताव गरेको छ । बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हवाई नीति २०७७ को मस्यौदामा व्यापारिक उडान गर्न नपाउने गरी कुनै संस्था वा व्यक्तिले निजी प्रयोगका लागि अनुमति प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको हो ।
नेपालमा अहिलेसम्म निजी प्रयोगका लागि विमान दर्ता गरेर उडान सञ्चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था छैन । सरकारले पहिलोपटक यस्तो व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको हो । हालसम्म व्यावसायिक उडानका लागि मात्र विमान दर्ता गरेर सञ्चालन अनुमति दिएको अवस्थामा मस्यौदा अनुरूप नै नीति पारित भएमा निजी विमान खरिद गरेर उडान गर्न सक्नेलाई बाटो खुला हुनेछ ।
मस्यौदामा २०६३ सालमा जारी गरिएको विद्यमान नीतिभन्दा केही थप व्यवस्था पनि गरिएको छ । हवाई सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यसका लागि दक्ष जनशक्तिसहितको छुट्टै हवाई सुरक्षा दस्ताको प्रस्ताव यसमा गरिएको छ ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा हवाई उडान प्रशिक्षण संस्था (फ्लाइङ स्कुल) सञ्चालन गर्न चाहने संस्थालाई तोकिएको अवधिसम्म निःशुल्क विमानस्थल प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने मस्यौदामा उल्लेख छ । नेपालमा दर्ता भएका वायुयान विदेशमा बेचबिखन गर्न वा लिजमा दिन सकिने गरी स्वीकृति दिन सकिने विषय पनि यसमा समेटिएको छ ।
सञ्चालनमा नआएका विमानस्थललाई उड्डयन अथवा पर्यटकीय क्रियाकलापका लागि सार्वजनिक निजी लगानी (पीपीपी) प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । त्यस्तै अनुसन्धानका लागि विमानको डिजाइन तथा निर्माणका लागि समेत व्यवस्था गरिने भएको छ । नीतिले वायुसेवा संस्थालाई पलायन हुन नदिन मर्जरलाई समेत प्रोत्साहन गरेको छ । याे खबर गाेरखापत्र दैनिकमा छ ।
Prevसंक्रमणदर तीव्र रुपमा फैलिँदै, काठमाडौं उपत्यकामा प्रत्येक घण्टा १० जनालाई संक्रमण
Nextमोरङको बेलबारीमा ‘ग्याङ फाइट’ हुँदा एकको मृत्यु , तीन घाइते
दुबईमा सडक दुर्घटनामा परि एक नेपालीको मृत्यु, शव नेपालमा आइपुग्दा परिवार र सिङ्गो बजार नरुने कोहि भएन
नासाको वैज्ञानिकले मंगल ग्रहमा देखे अद्भुत पत्थर, वैज्ञानिक भए अचम्म !!
सोच्नै नसकिने गरी फेरि एक्कासी घट्यो सुनको भाउ, तोलाको कति हेर्नुहोस ?
विद्यार्थीले परीक्षामा यस्तो जवाफ लेखेपछि जाँच्ने शिक्षक नै बेहोस (25396)
कपाल काट्न नमानेको बालकले नाईलाई दिएको चेतवानीका शब्द सुन्दा दुनियाँ हैरान ! [भिडियोसहित] (12395)
एकदमै पातलो दुब्लो साथै कमजोर महसुस गर्नुहुन्छ ? यो चिज खानुहोस् ५ दिनमै देख्नुहुनेछ यसको चमत्कार (8062)